Ndị na-ezipụ ozi na-emegharịgharị emegharị bụ ngwọta zuru oke maka ịchekwa ihe mgbe ị na-ezipụ ma ọ bụ na-ebupu ya n'ụzọ enyi na enyi.
Nhọrọ anyị dị ugbu a gụnyere obere akpa na-enweghị mgbochi na ihe mgbochi na-egosipụta uru ndị a:
Ọmarịcha ihe mgbochi na usoro multilayer mmiri
Nkwado ngwaahịa FDA maka ịkpọtụrụ nri ozugbo
Njirimara 5 ọwa mkpọchi mkpọchi mkpọchi mkpọchi
Na -emezi maka How2Recycle® Ụlọ ahịa dobe-apụ
Mpempe akwụkwọ kwụ ọtọ maka mmiri mmiri na ngwongwo akpọnwụwo. Ọtụtụ mgbe nwere windo doro anya iji lelee ngwaahịa, obere akpa ndị a na -enye mmetụta siri ike na -adị na shelf ụlọ ahịa ka ha na -enye arụmọrụ ohere maka ịkpakọba.
Ntozu maka akara mbubata Storelọ Ahịa How2Recycle®
Site na mmekọrịta anyị na mmemme Sustainable Packaging Coalition® How2Recycle®, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ maka idobe ụlọ ahịa. imegharị akpa akpa recyclable. Nhọrọ anyị ugbu a gụnyere akpa na-enweghị mgbochi na ihe mgbochi kwụ ọtọ zippered nwere uru ndị a: